PERIKOPA FJKM ALAHADY 29 MARSA 2014 | FJKM Amboniloha
PERIKOPA FJKM ALAHADY 29 MARSA 2014
Salamo 66.8-12 / Jaona 12.12-19 / Romana 5.1-5
8 Misaora an’Andriamanitsika, ry firenena; ary asandrato ny feo fiderana Azy,
9 Izay mampitoetra ny fanahintsika amin’ny fiainana ka tsy mamela ny tongotsika hangozohozo.
10 Fa efa nizaha toetra anay Hianao, Andriamanitra ô; efa nanadio anay Hianao, tahaka ny fanadio volafotsy amin’ny memy.
11 Efa nampiditra anay tamin’ny fandrika Hianao; efa nanisy enta-mavesatra teo am-balahanay Hianao.
12 Efa nampandeha ny olona hanitsaka ny lohanay Hianao; nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay; fa nitondra anay nivoaka ho amin’ny fitahiana mahatretrika Hianao.
12 Ary nony ampitson’iny ny vahoaka betsaka, izay tonga ho amin’ny andro firavoravoana, rehefa nahare fa hankany Jerosalema Jesosy,
13 dia naka sampan-drofia ka nivoaka hitsena Azy sady niantso hoe: Hosana! Isaorana anie ny Mpanjakan’ny Isiraely, Ilay avy amin’ny anaran’i Jehovah (Sal. 118, 26).
16 Izany zavatra izany dia tsy fantatry ny mpianany tamin’ny voalohany; fa rehefa niditra tamin’ny voninahiny Jesosy, dia vao nahatsiaro izy fa voasoratra hilaza Azy izany zavatra izany, ary efa nataony taminy izany.
17 Ary nanambara Azy ny vahoaka izay teny aminy, fony Izy niantso an’i Lazarosy hivoaka tamin’ny fasana ka nanangana azy tamin’ny maty.
18 Ary izany koa no nitsenan’ny vahoaka Azy, satria efa reny fa nanao izany famantarana izany Izy.
19 Ary tamin’izany ny Fariseo dia nifampilaza hoe: Hitanareo fa tsy mahefa na inona na inona akory ianareo; indro, efa lasa manaraka Azy avokoa izao tontolo izao.
1 [Ny soa ananan’ny mino an’i Kristy, sy ny fihoaran’izany noho izay soa verin’i Adama] Koa amin’izany, satria efa nohamarinina tamin’ny finoana isika, dia aoka isika hanana* fihavanana amin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Tompontsika. [* Na: (dia manana)]
2 Tamin’ny alalany koa no efa nahazoantsika fanatonana amin’ny finoana ho amin’izao fahasoavana itoerantsika izao, ka dia aoka isika hifaly amin’ny fanantenana ny voninahitr’Andriamanitra.
3 Ary tsy izany ihany, fa aoka isika hifaly amin’ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana;
5 ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra, satria ny Fanahy Masina, Izay nomena antsika, no nentiny nampidina ny fitiavan’Andriamanitra* ho ao am-pontsika. [* Na: ny fitiavana an’Andriamanitra]
Catégories :	Perikopa FJKM	/ par AnjGab 23 mars 2015